संवैधानिक इजलासमा ‘पिक एन्ड चुज’ पुस १०, २०७७कृष्ण ज्ञवाली - Charchit Entertainment!
Home bjob संवैधानिक इजलासमा ‘पिक एन्ड चुज’ पुस १०, २०७७कृष्ण ज्ञवाली
संवैधानिक इजलासमा ‘पिक एन्ड चुज’ पुस १०, २०७७कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदन सुनुवाइका लागि केही बेरअघि मात्रै ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । न्यायपरिषद्ले तय गरेका १४ जना न्यायाधीशको सूचीबाट उनले आफूसहित अरू चार जनालाई छानेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघिको अभ्यासभन्दा फरक रूपले इजलास गठन गरेका छन् । उनले सूचीमा रहेको वरिष्ठताक्रमलाई पछ्याएका छैनन् । उदाहरणका लागि जबराले आफूपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई इजलासमा राखेका छैनन् । त्यसपछिकी न्यायाधीश मीरा खड्का पनि इजलासमा परेकी छैनन् । यसअघि सामान्यतया वरिष्ठताक्रम पालना गरी इजलास गठन गरिन्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइको निष्पक्षता र तटस्थतालाई यति बेला पेचिलो विषयका रूपमा हेरिएको छ । त्यसैले इजलास गठनका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले के आधारमा अरू चार न्यायाधीश छाने, त्यसको कुनै आधार वा मापदण्ड बनेको हुनुपर्छ । तर त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन ।
हालको सूची हेर्दा चौथो वरीयताक्रमका हरिकृष्ण कार्की इजलासमा परेका छन् । उनी जबरापछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा समेत छन् । कार्कीपछिको वरीयताक्रममा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि इजलासमा छन् । त्यसपछिका दुई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको नाम ‘अर्थपूर्ण रूपमा’ इजलासमा परेको छैन । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अनिलकुमार सिन्हालाई इजलासमा राखिएको छ ।
सिन्हापछिका प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल पनि इजलासमा छैनन् भने त्यसपछिका तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा राखिएका छन् । उनीसँग प्रधानन्यायाधीशको अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध रहेको भनी न्यायिक क्षेत्रमा चर्चा चल्ने गरेको छ । इजलासमा परेकामध्ये केसीमात्रै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छैनन् । उनी इजलासमा नपरेको भए प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू मात्रै संवैधानिक इजलासमा परेको भनी अर्थ लगाउन पनि मिल्थ्यो । तर केसीसमेत संवैधानिक इजलासमा परेकाले जबराले न्यायाधीश छान्ने क्रममा लिएको आधार अनुमान गर्न कठिन छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा)
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा)
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा)
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नरहेका)
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नरहेका)
न्यायाधीश मीरा खड्का (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नरहेकी)
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
न्यायाधीश प्रकाशनमानसिंह राउत (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा)
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा)
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नरहेका)
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नरहेका)
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान (प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नरहेका)